Sakafo varim-bary: mampihena ny lanja amin'ny fihinanana tuna sy vary. Nanandrana ve ianao? | Nutri Diet
PaÃ¼ Heidemeyer | | Vatsim-pivelomana, fahasalamana
Ahoana no hahitanao an'ity sakafo fihinanam-bary Tsotra tokoa ny fanatanterahana, angamba somary monotonous, noho izany, tsy tokony hihoatra ny herinandro ny faharetany satria amin'ny fotoana maharitra dia tsy hanana otrikaina maro amin'ny vatantsika isika. Sakafo fianjerana izay manamora ny fihenan-danja.
Ity sakafo ity dia tsy manome menaka firy, fa ny ampahany kely azo avy amin'ny tuna am-bifotsy voajanahary. ny ny vary misy fihinana tuna dia natao hahavery hatramin'ny 3 kilao ao anatin'ny 6 andro, noho izany dia mila maharitra ianao ary manana tanjona mazava.
1 ?Ny sakafom-bary miaraka amin’ny tonelina mba hampihenana ny lanjany
1.1 ?Ny sakafo fihinana vary isan’andro
2 ? Toetran'ny tononkalo voajanahary
3 ?Vary fotsy na vary mena
4 ?Vary miaraka amin'ny tononkalo ao amin'ny gym
5 ?Matavy ny fihinanana vary fotsy?
?Ny sakafom-bary miaraka amin’ny tonelina mba hampihenana ny lanjany
Ny sakafom-bary, araka ny hita, dia miorina amin'ny tuna sy ny vary, singa roa misy fananana mahafinaritra hampihena ny lanjany.. Sakafo roa izay mandeha miaraka tanteraka ary afaka manampy anao hamoy ireo kilao fanampiny izy ireo.
Sakafo tena tsotra tokoa ny fanatanterahana azy, miankina amin'ny fihinanana tuna sy vary izany. Raha tena hentitra ianao dia hamela anao 3 kilao ao anatin'ny 6 andro fotsiny.
Raha tapa-kevitra ny hampihatra an'io fitondrana fihinanan-tsakafo io ianao dia tsy maintsy salama ara-pahasalamana, misotro rano betsaka araka izay azo atao isan'andro, mampiasa tuna voajanahary, manandrana ny fampidiranao amin'ny zava-mamy ary manaova sira ny sira ary fatra kely indrindra menaka oliva. Tsy maintsy averinao isan'andro ny takelaka voalaza etsy ambany izay anaovanao ilay drafitra.
?Ny sakafo fihinana vary isan’andro
Desayuno: Fampidirana 1 (dite, kafe na vady efa masaka) ary voankazo 2.
Midmorning: Yaorta ambany tavy 1 misy voankazo na voamadinika.
sakafo atoandro: tuna sy vary ary ampahany 1 amin'ny gelatin maivana. Afaka mihinana ny habetsaky ny tuna sy ny vary tadiavinao ianao.
Afak'andro tolakandro: Ranom-boankazo voasarimakirana 1 vera tianao.
fitsangatsanganana: Fampidirana 1 (dite, kafe na vady efa masaka) ary tsaramaso varimbazaha iray manontolo miaraka amina fromazy mba hampidirana salut maivana.
sakafo hariva: tuna sy vary ary ampahany 1 amin'ny gelatin maivana. Afaka mihinana ny habetsaky ny tuna sy ny vary tadiavinao ianao.
? Toetran'ny tononkalo voajanahary
Amin'ny ankabeazan'ny fotoana dia mihinana tuna voajanahary am-bifotsy isika, sakafo izay an'ny vondrona trondro am-bifotsy. Ny fananana sy ny tombony azo dia marobe, manome vitamina B3 isika, isaky ny 100 grama dia manome antsika 19 mg eo ho eo.
Misy proteinina be dia be, efa ho 24 grama isaky ny 100 g. Noho ny habetsaky ny proteinina ao aminy dia sakafo tena sarobidy ho an'ireo mpanao fanatanjahantena indrindra izy io, ho fanampin'izany, amin'ny fahazazana, fahatanorana na fitondrana vohoka, tena ilaina ny fihinanana azy.
Ankoatr'izay dia manampy amin'ny fampihenana ny kolesterola izy io, amin'ny ady amin'ny aretina toy ny diabeta, aretin-tratra na tinnitus.
?Vary fotsy na vary mena
Ny vary dia iray amin'ny foto-tsakafon'ny planeta, amin'ny kolontsaina maro dia lanina isan'andro. Betsaka ny karazana vary, fotsy, volontany, lava, ala, mena sns.
Ho an'ny sakafon-tsika, samy azo lanina tsy misy olana, na izany aza. vary mena dia manome tombony lehibe kokoa ho an'ny vatana.
Elaela vao mahandro ny vary mena, na dia mandoa fotoana aza. Manome fibre maro hafa, mineraly betsaka kokoa ary manatsara ny fiasan'ny tsinay. Manakana ny aretina isan-karazany sy manadio ny vatana. Raha ny marina, ny vary mena dia manana proteinina betsaka noho ny vary fotsy.
Raha tsy manana olana ara-pahasalamana ianao ity sakafo ity dia azo tanterahina ara-dalàna, Tsy maintsy misotro rano be ianao hanadiovana tsara ny vatana sy ireo poizina rehetra ao aminy. Tsy maintsy mampiasa volon-koditra voajanahary isika, raha te-hamamamo zavatra, mampiasa zava-mamy voajanahary, manandrana sira kely indrindra ny sakafo, ary tsy mampiasa afa-tsy iray sotro ny menaka oliva fanampiny iray isan'andro.
?Vary miaraka amin'ny tononkalo ao amin'ny gym
Ao amin'ny gym manao fanatanjahan-tena isika hanovana ny toetran'ny fisehoantsika ara-batana, te-ho very tavy isika ary hamolavola ny endritsika. Ataovy izay hampivoatra ny hozantsika ary ny marina dia io sakafo io no aseho mba hahazo ny feo ny hozatra tsy misy olana.
Ny ankamaroan'ny olona dia mampiasa kojakoja fanatanjahan-tena be dia be saingy tsy ilaina izany satria miaraka amin'ny tuna sy ny vary dia hameno tsara ny hozatra isika satria ho an'ny fitomboan'ny hozatra dia mila proteinina fanampiny isika ary mamorona tavy hozatra.
Del lamàtra asongadinay fa tsy ny proteinina be dia be Tsy misy asidra matavy omega 3 fotsiny, izay tena mahasoa ny fo, mampihena ny tahan'ny kôlesterôla sy triglyceride ao anaty ra, ary mpiara-miombon'antoka amin'ny fiasan'ny neuronal sy ny fiaraha-miasa ihany koa.
Azontsika atao ny mandany azy amin'ny fomba arivo, hitantsika fa vaovao na am-bifotsy. Manoro hevitra antsika fa raha lanintsika anaty kaline io, dia voajanahary izany, na tsy namboarina na tamin'ny menaka, satria io fomba io no hahatratrarantsika ny fananany rehetra ary ny tavy ampiarina amin'ny indostria dia manova ny sakafon-tsika.
Vary fotsy antsasaky ny kapoaka misy kaloria 103, ary vary volontsôkôla antsasakà kapoaka. Tsy misy kôlesterôla, tavy na sodium. Izy io dia gliosida saro-bidy, mora levona ary tsy misy gluten na misy fiantraikany amin'ny allergy.
?Matavy ny fihinanana vary fotsy?
Rehefa mahatsapa mavesatra isika dia ara-dalàna ny mahatsapa fa mila very kilao vitsivitsy, mazàna isika manao izany amin'ny fampitomboana ireo ora fanazaran-tena isan-kerinandro sy amin'ny fifehezana ny fahazarana mihinana.
Matetika isika dia tsy manana sakafo manankarena gliosida, toy ny vary fotsy, fa ny marina dia mila gliosida ny vatana mba hanana fiasa ara-batana mety.
Ny karbohidraty dia manampy anao hahatsapa ho voky Mandritra ny fotoana lava kokoa dia voalaza fa ny gliosida koa dia manampy anao handatsaka tavy.
Anisan'ny tombony azon'ny vary fotsy ny gliosida manahirana, midika izany fa mamela ny vatana haka fotoana ela kokoa handoroana ny kaloria nohanina tamin'izany fotoana izany.
Ny vary fotsy dia miavaka amin'ny starchNoho izany dia tena ilaina izy amin'ny tranga fivalanana, satria sakafo be indostrialy io karazan-bary io, tsy dia misy otrikaina kely noho ireo karazany ao aminy.
Zava-dehibe ny mampifantoka ny sainy ny vary dia manana fananana mitroka sy mitazona rano, noho izany ny fandrahoan-tsakafo azy dia tsy tokony hararaotina satria ny vary dia afaka mijanona ho malefaka be tokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Sakafo vary
ny vary tsy matavy? Manana hydrate be dia be x izay heveriko fa mampatavy azy io, te-hanao azy aho nefa mampatahotra ahy, manome torohevitra ahy ve ianao? matavy sa tsia?
Chikimalota dia hoy izy:
Salama, manana sakafo fihinanana vary sy tuna aho
Valiny amin'i Chikimalota
Salama, very lanja tsara arak'ilay olona
Flore dia hoy izy:
Fotsy sa volontsôkôlà ny vary ????, afaka misakafo soda ve ianao ??? !!!! Manaikitra siligaoma tsy misy siramamy, azonao atao ve ???
Mamaly an'i Flore
Erwin reyes dia hoy izy:
Tsy matavy i Denis, mila fantatrao fotsiny izay ora hihinanana azy ohatra, ampirisihina handany azy alohan'ny handehananao any amin'ny gym satria ny gliosida dia angovo eo noho eo, fa mety ho hadisoana ny fihinanana azy betsaka rehefa lasa amin'ny gym izay efa nandanianao ny herinao ary ny zavatra hitranga dia ny fizotrany izay hanova ny gliosida ho tavy!
Valiny tamin'i Erwin Reyes
Salama tiako ho fantatra raha mandeha io
Azafady mba misy miteny amiko
Paolita dia hoy izy:
Mila vary ve ny vary? Valio azafady
Valiny tamin'i Paolita
Hataoko tsara izany. Mety ho vary ho an'izay manontany izany, voaporofo aza fa ny vary fotsy tsy manana kaloria kely noho ny vary volontany raha tsy mino ahy ianao dia tadiavo amin'ny arahaba amin'ny Internet
Tsy voatery hampiraikitra izy io, na dia betsaka aza ny tombony azo avy amin'ny fibre, mety ho vary any amin'ny banky izy ary ny fanafody no satrok'ireo serealy tonga amin'ny yaourt.
Niki dia hoy izy:
Salama daholo izay liana hahafantatra raha ilaina hampihena ny lanja ity sakafo ity, satria lazaiko aminao fa eny, satria ataoko foana io ary tena mety amiko io, ankoatranao mahatsapa tena tsara manao an'io sakafo io, ny vary fotsy dia tsara, vidio ao amin'ny Mercadona izy ireo, mangatsiaka izy ireo, sachet dia ampy ho an'ny ampahany misy kapoaka vita amin'ny tuna voajanahary, mahavoky tsara izy, ny marina dia, miasa tanteraka ho ahy izy io.
tian'izy ireo hatao izany
Mamaly an'i niki
Maneno va dia hoy izy:
Tsy tsapan'izy ireo ve fa ny tuna am-bifotsy dia manana preservatives be dia be?
Mamaly an'i brai
Ity sakafo ity dia tena ratsy na inona na inona valiny azo tratrarina. Tsy misy karazana proteinina biby ary ilaina amin'ny vatana.
Ny fananana vary ho an'ny sakafo hariva dia manampy amin'ny fitomboan'ny hozatra. Raha tsy mankeny amin'ny gym ianao dia hahatonga anao hanana 6 kilao ao anatin'ny herinandro ity sakafo ity.
Tuna ihany no ao anatiny, miala tsiny, fa tsy ampy izany, satria hanana tsy fahampiana ny vatana. Tsy misy legioma koa ao.
Tsy misy akoho, vorontsiloza, legume, voankazo (manome anao tavy) sy legioma ity sakafo ity.
msiley dia hoy izy:
Raul, raha ny fahalalako azy dia proteinina biby ny tuna.
Mamaly an'i msiley
Ka tiako ho fantatra hoe iza no nanao an'io ... mandeha ve ny sakafo sa tsia?
Maris Voasazy Cherry dia hoy izy:
Saika mihinana vary miaraka amin'ny tuna foana aho ary tena tsara, ary mameno anao betsaka izany, fa raha mihinana zavatra mitovy foana ianao, dia ho maharikoriko sy ho reraka ao anatin'ny roa andro monja.
Torohevitra misy valiny manokana:
Ho fanampin'ny vary misy tuna dia mihinana salady voatabia misy atody na kôkômbra, akoho nandrahoina, na hena mena nendasina na natsatsika tsy nisy menaka. Rehefa te-hihinana amin'ny mitatao vovonana toy izany aho, ary amin'ny alina raha noana be dia averiko ny sakafo voalaza etsy ambony, raha tsy noana loatra aho dia manana dite maitso 1 na 2, dite chamomile, na dite klasika Anisan'ireo ny sasany kosa dia mandevona ny tsiranoka ary manampy amin'ny fanadiovana anao ao anaty ary ario ny ranoka rehetra, ary raisiko izy ireo satria tsy dia tiako loatra ny rano irery. Ary raha mila mihinana zavatra mamy ianao, mihinana voankazo, voasary, frezy, pasteky, tangerine, sns, gelatin maivana, na yaourt can Azoko lazaina ao anatin'ny iray andro monja ny fikorontanan'ny vatako, ny rahavaviko koa dia nanao sakafo fihinanana betsaka hena tsy misy menaka sy tavy ary very lanja be aho ... Tsy maintsy apetrakao ny sitrapo sy ny sorona kely. Farafaharatsiny, lafo be amiko izany satria tiako ny zavatra mamy, saingy mieritreritra ny vokatra ho azoko amin'ny farany aho ary faly amin'ny vatako. Ankoatry ny lanjanao loatra dia mameno olana anao, tsy afaka mahazo mora foana ny ankizy ianao na marary matetika: \_
Ka ny hany zavatra tokony hataonao dia ny maniry.
Valiny tamin'i Maris Voasazy Cherry
Jane dia hoy izy:
Nataoko izany ary tena niasa tsara ho ahy izy io, tena ataoko isam-bolana izany, ry namana soa
Mamaly an'i jane
Salama, nihinana ny sakafo fihinan'ny vary sy tuna ve ianao?
Anne Lorraine dia hoy izy:
Salama, nahasoa anao ve io sakafo io, ahoana no nanaovanao azy?
Valiny tamin'i Ana Lorena
Salama tsara fa te hahalala raha mandeha androany dia nanomboka ny sakafo aho
Salama, azafady, olona iray izay nanao fihinanam-bary sy tuna ary izay niasa ho azy, te-hanao izany aho saingy matahotra aho, nilaza foana izy ireo tamiko fa mitombo lanja be ny vary, avy eo?
Iris Navarro dia hoy izy:
fa ahoana ny fanomanana ny vary? etona ihany?
Mamaly an'i iris navarro
Mandra-pahoviana no manaraka ny sakafo?
Isaky ny kapoam-bary dia mandraraka rano mahandro 1 kaopy sy ampahefatra izahay. Tsy mila menaka na sira ianao. Manarona ny vilany izahay ary rehefa etona ny rano dia ampidininay ny hafanana farafahakeliny 5 minitra, andrana fa masaka izy, vonoinay.
Valiny tamin'i Luis Fernado
martha landa dia hoy izy:
50 GS ARROS YAMANI EO TOA NY CALORIES ANAO
Valiny tamin'i Marta Landa
Salama, tiako ho fantatra raha misy olona tsy manao fanatanjahan-tena, raha nanao izy ary raha nihena ny lanjany
nadi dia hoy izy:
Salama, ny zanak'olo-mpiray tam-po amiko dia eo amin'ny sakafo tonelina sy vary mena…ary very telo kilao mahery aho satria very dimy kilao sy sasany nefa tokony hisotro rano roa litatra ianao… enina andro… Manantena aho fa mety ho anao izany ary toro-hevitra iray hafa amin'ny vavony foana izay nataoko dia ny fakana menaka oliva virjiny virjiny sotroina mangatsiaka miaraka amin'ny voasarimakirana vitsivitsy… manalefaka ny kibonao ary manala ny fitohanana ho azy. manome tombony an'arivony ho anao... manao zavatra ho an'ny fahasalamanao????????
Mamaly an'i nadi
Tsy misy fiatraikany lehibe ve io sakafo io?
Marisol Lizard dia hoy izy:
Nilaza izy ireo fa ny tuna sy ny vary fa tsy milaza ny habetsahan'ny tokony hohanin'ny olona amin'ny fotoana voalaza fa 1 kapoaka 2 kapoaka 1 kapoaka na firy isam-bolo !! ??? Ary ny tonony dia tsotra sa afaka manampy voatabia kôkômbra sns ????
Valiny tamin'i Marisol lagarda
Voalaza mazava tsara fa ny vary sy ny tuna amin'ny habetsaky ny zavatra tadiavina ary raha tsy tononinao ny anarany ny sisa amin'ireo singa ... dia satria tsy afaka mihinana azy ianao!
irem guido dia hoy izy:
Te-haneho hevitra fotsiny aho fa ny sakafo misy tuna sy vary dia tena mandaitra, efa nanao lanja sy gymnastika nandritra ny taona maro aho ary isaky ny miverina na miala amin'ny fanatanjahantena, io sakafo io dia nanampy ahy hiverina amin'ny toerana mety indrindra, tsy tokony hararaotina, io no atolotra Ho an'izay mbola tsy nanaraka an'io, ataovy tsy mihoatra ny 15 andro, afaka manohy mihinana ianao fa ny hena sy ny voankazo kosa tokony hampidirina, ahena ny fihinanana ary tena tsara ho an'ny sakafo hariva, aorian'ny 15 andro dia tokony hisolo ny mahazatra ianao vary ho an'ny vary volontany, rehefa manomboka zatra azy ny vatana, ny tolo-kevitro tsara indrindra, dia nampiasa vary sushi tsy misy starchy aho, totohondry foana ary kapoakan'ny tuna voajanahary na anaty rano isaky ny misakafo, dia mahatsiaro ho afa-po ianao ny tsinaibe sy ny may Calorine dia mitombo amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny metabolisma, ampio rano voasarimakirana tsy mamy ho amin'ny mitataovovonana ary hahita kilao 6 farafahakeliny ianao ao anatin'ny iray volana hatramin'ny 9, arahabaona
Valio i Irem guidò
volontsôkôlà dia hoy izy:
Salama, mihabetsaka ny vary rehefa mihinana be dia be ary mitazona fiainana mipetrapetraka. Raha manao fanatanjahan-tena ianao dia manao fanatanjahan-tena kardio ary mametra ny haben'ny vary mety hanampy anao hihena. Misy fomba maromaro ihany koa hanomanana vary ho ahy. Ny vary tsara indrindra dia hatsohana tsy misy menaka.
Mamaly an'i Criss brown
Salama, damiam aho, tsara ny vary sy ny tuna fa tsy maintsy afangaroinao amin'ny fanatanjahan-tena izany, na gymnastika na kardio, satria mihinana an'izany aho mba hahazoana habetsahan'ny vatana.
karem dia hoy izy:
Salama, te hahafantatra aho raha azo atao «tuna» am-bifotsy miaraka amin'ny menaka ilay tuna, satria aiza no misy ahy dia tsy afaka mahazo «tuna» voajanahary ianao
Mamaly an'i karem
Te hahafantatra aho raha misy afaka mamaly ahy an'ity ...
Afaka am-bifotsy diloilo ve ny tuna? satria aiza aho no tsy afaka mahazo ny natiora ...
misaotra ny rehetra…
Antony hampiasana ranom-boasarimakirana bebe kokoa ao an-dakozia